कुनकुन जिल्लामा छान्यो एमालेले महाधिवेशन प्रतिनिधि ? | Safal Khabar
कुनकुन जिल्लामा छान्यो एमालेले महाधिवेशन प्रतिनिधि ?
शनिबार, २७ कार्तिक २०७८, १७ : २२
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिरहेको छ । करिब ८ लाख पार्टी सदस्यहरुबाट १९९९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने जनाएको सो पार्टीले शनिबार दिउँसोसम्म १२ वटा जिल्लाका प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएको जनाएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि सहमतिमार्फत नै प्रतिनिधि छनोटको क्रम जारी रहेको एमालेले जनाएको छ ।
महिला स् शान्ति पाख्रीन, कालिका पाठक, कमला बस्नेत, उर्मिला थामी, गायत्री आचार्य, गोमा केसी र शान्तिकुमारी तामाङ ।